Nepal Auto | महाप्रबन्धक सुरेशकुमार तिवारीसँगको अन्तर्वार्ता : जहाँ एक्साइड, त्यहाँ सर्भिस
महाप्रबन्धक सुरेशकुमार तिवारीसँगको अन्तर्वार्ता : जहाँ एक्साइड, त्यहाँ सर्भिस 16 Magh, 2075
नेपाली बजारका लागि सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले एक्साइड ब्याट्री उपलब्ध गराइरहेको छ । एक्साइड ब्याट्री नेपाली बजारमा सन् २००० देखि उपलब्ध हुन थालेको हो । व्यवसायको शुरुवातदेखि नै बिक्री पछिको सेवामा ध्यान दिंदै डिलर नेटवर्क विस्तार गरेका कारण सिप्रदीप्रति ग्राहकको विश्वास उच्च छ ।
यसै सन्दर्भमा एक्साइड ब्याट्रीको विशेषता र नेपाली बजारमा यसको अवस्था वारेमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि, एक्साइड डिभिजनका महाप्रबन्धक सुरेशकुमार तिवारीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको पछिल्लो बजार अवस्था कस्तो छ ?
सवारी साधनमा प्रयोग हुने टु ह्विलर र अटोमोटिभ ब्याट्रीको बजार हरेक बर्ष बढ्दो क्रममै छ । सवारी साधनको आयतमा जुन प्रकारले वृद्धि भइरहेको छ सोही अनुपातमा ब्याट्रीको खपत समेत बढेको छ । यस हिसावले हेर्दा अघिल्लो बर्षको तुलनामा यो बर्ष २० प्रतिशत हाराहारीले ब्याट्रीको बजार वृद्धि हुने देखिन्छ ।
एक्साइडको हकमा के छ ?
‘टोटल इन्डष्ट्री भोल्युम’ नै बढिरहेको कारण एक्साइडको मागमा समेत उच्च वृद्धि भएकोे छ । इन्भर्टर ब्याट्रीको खपतमा ह्रास आएपछि अहिले हाम्रो टिमको पुरै ध्यान मोटरसाइकल र अटोमोटिभ सेगमेन्टमा केन्द्रित छ । जसका कारण पनि यो सेगमेन्टमा हाम्रो बजार हिस्सा थप मजवुत भएर गएको छ । अहिले अटोमोटिभमा ६० प्रतिशत र मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत बजार हिस्सासहित एक्साइड नम्वर वान ब्रान्डका रुपमा स्थापित छ ।
अटोमोटिभ्सको तुलनामा मोटरसाइकल ब्याट्रीको बजार हिस्सा निकै कम देखियो, किन होला ?
मोटरसाइकल ब्याट्रीमा प्रतिस्पर्धा अलि बढी नै छ । यो सेगमेन्टका ग्राहकहरु गुणस्तरमा भन्दा मूल्यमा बढी जोड दिने स्वभावका हुन्छन् । कमसल गुणस्तरका सस्ता चिनियाँ ब्याट्रीको तुलनामा हाम्रो ब्याट्री केही महंगो पर्ने हुँदा बजार हिस्सा केही कम भएको हो । अर्को कुरा ग्राहकले एक्साइड खोज्दा खोज्दै पनि बजारलाई प्रभाव पार्न खोज्ने त्यस्ता केही तत्वहरुले अनुचित लाभका लागि अन्य ब्रान्डका ब्याट्री प्रयोग गरिदिने विकृतिका कारण पनि बजार हिस्सा सोचेअनुसार बढ्न नसकेको हो । तर जसले गुणस्तरलाई वुझेका छन् तिनले महंगो परेपनि एक्साइड नै प्रयोग गर्छन । यसमा कुनै दुइमत छैन ।
एक्साइड विगत लामो समयदेखि नम्वर वान बनिरहनुको पछाडि खास कारण त्यस्तो के छ ?
अटोमोबाइल क्षेत्रमा सिप्रदी ट्रेडिङको ३६ बर्षदेखिको लामो अनुभव छ । सिप्रदीले सन् १९८२ देखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । एक्साइड ब्याट्री भने सन् २००० मा भित्र्याएको हो । व्यवसायको शुरुवातदेखि नै बिक्री पछिको सेवामा ध्यान दिंदै डिलर नेटवर्क विस्तार गरेका कारण सिप्रदीप्रति ग्राहकको विश्वास उच्च छ । ग्राहकको विश्वास नै सिप्रदी सफलताको जग हो । त्यही बलियो जगका कारण एक्साइड विगत लामो समयदेखि ब्याट्री बजारमा नम्वर वान बनिरहेको छ । गुणस्तरीय उत्पादन, दक्ष तथा अनुभवी कामदार र बिक्री पछिको सेवाका कारण भोलिका दिनमा पनि यो स्थान सुरक्षित रहने विश्वास लिएका छौ । जसका लागि कम्पनीले ग्राहकलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा÷सुविधा दिने गरी नयाँ रणनीति अपनाएको छ ।
कस्तो नयाँ रणनीति भन्न खोज्नुभएको ?
हामी अहिले ‘जहाँ एक्साइड त्यहाँ सर्भिस’ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेका छौ । ब्याट्रीमा समस्या आएकै कारण कुनैपनि ग्राहकले दुख भोग्नु नपरोस भन्ने विषयमा हाम्रो कम्पनी निकै नै सचेत भएर लागिपरेको छ । ग्राहकलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा/सुविधा उपलव्ध गराउन ब्याट मोबाइल भ्यान र स्कुटरमार्फत ग्राहकको घरदैलोमै पुगेर सेवा दिइरहेका छौ । सो प्रयोजनका लागि काठमाडौंमा मात्र १० वटा स्कुटर परिचालित छन् । यस्तो सेवा ३६५ दिन नै चालु हुन्छ ।
काठमाडौंको हकमा गुनासो आएको डेढ घण्टाभित्र समस्याको समाधान गर्ने गरेका छौ भने वाहिरको हकमा हाम्रो आफ्नै सर्भिस सेन्टर र आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमार्फत जतिसक्दो छिटो सेवा दिइरहेका छौ । यस्तो सेवा दिंदा कुनै अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छैनौ । पोखरा र इटहरीबाट समेत यस प्रकारको सेवा शुरु भइसकेका छन् भने देशभरका हाम्रा २३५ वटै नेटवर्कमार्फत ब्याट्रीसँग सम्वन्धित विभिन्न सेवा÷सुविधा पाउन सकिन्छ ।
अहिले अटोमोटिभमा ६० प्रतिशत र मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत बजार हिस्सासहित एक्साइड नम्वर वान ब्रान्डका रुपमा स्थापित छ ।
वारेन्टी अवधिभित्रै यदि कुनै खरावी देखिएमा त्यसको क्लेम अत्याधुनिक उपकरण (मिडट्रोनिक्स) को प्रयोग गरी दिन थालेका छौ । मेसिनबाटै ब्याट्रीको चेकजाँच गरी उसले जे निर्देशन दिन्छ सोही अनुसार समस्याको समाधान छिटोछरितो तवरबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । हामीसँग भएको मेसिनले ब्याट्रीको डायग्नोसिस गरेर प्रिन्टेड रिजल्ट समेत दिन्छ । ग्राहकको आँखा अगाडि नै मेसिनले चेक गरी रिजल्ट दिने हुँदा समस्याको सही पहिचान हुने र हामीले दिने सेवामाथि विश्वास गर्ने वातावरण समेत बन्छ । यस्तो प्रविधिको प्रयोग गरी ग्राहकलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने सिप्रदी एकमात्र कम्पनी हो ।
नेपाल भित्रिने कुन कुन ब्रान्डका सवारी साधनमा एक्साइड ब्याट्री ओईएमको रुपमा प्रयोग भएको छ ?
एक्साइड नेपालमा मात्र नभएर भारतको समेत नम्वर वान ब्याट्री ब्रान्ड हो । यसले अटोमोटिभ देखि ठूला ठूला जहाजहरुमा प्रयोग हुने ब्याट्रीसमेत उत्पादन गर्छ । भारतमा उत्पादन भएर विश्वबजारमा निर्यात हुने प्रायः सवैजसो ब्रान्डका सवारी साधनमा एक्साइड ब्याट्री नै बढी प्रयोग हुने गरेको छ । अहिले ९० प्रतिशत भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन भारतमा उत्पादन भएर नेपाल भित्रिन्छन् । भारतमा जति पनि सवारी साधन उत्पादन हुन्छन् ती मध्ये अधिकांशमा एक्साइड ब्याट्री नै ओईएम अर्थात ओरिजिनल इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्सको रुपमा उपलब्ध छन् । एकाध ब्रान्डलाई छाड्ने हो भने अधिकांशमा एक्साइड नै ओईएमको रुपमा प्रयोग भएर आउने गरेको छ । एक्साइडसँग २ दशमलव ५ एम्पियर आवरदेखि २ लाख एम्पियर आवर क्षमतासम्मका ब्याट्री उपलव्ध भए तापनि हामीले नेपाली बजारको माग र आवश्यकता अनुसारका साइज र क्षमताका ब्याट्रीमात्र उपलव्ध गराइरहेका छौ ।
केही समय अघि नयाँ ब्याट्रीसमेत भित्र्याउनु भएको थियो । त्यसका वारेमा पनि बताइदिनुस् न ?
ग्राहकको आवश्यकता र माग अनुसार हामीले नयाँ उत्पादन समेत भित्र्याउने गरेका छौ । सोही क्रममा मोटरसाइकलका लागि कन्भेन्सनल भीआरएलए प्रविधिको बाइकर्ज नाम गरेको ब्याट्री भित्र्याएका थियौ । योे ब्याट्री भित्रिएसँगै मोटरसाइकल सेगमेन्टमा बजार हिस्सा समेत बढ्न थालेको छ । नयाँ ब्याट्री पहिलेको तुलनामा केही सस्तो र सुलभ समेत छ । अटोमोटिभ्समा पनि हामीले नयाँ ब्याट्री भित्र्याएका छौं । मूल्य कम गराउने उद्देश्य अनुसार यसअघि दिइंदै आएको वारेन्टी अवधिलाई कम गरेर क्यावी र गोल्ड नामका दुई नयाँ ब्याट्री भित्र्याएका हौं । यी मध्ये क्यावी ट्याक्सीकै लागि भनेर उत्पादन गरिएको हो । गोल्डमा भने पहिलेकै गुणस्तर कायम रहने गरी वारेन्टी अवधि मात्र कम गरिएको हो । यी दुई नयाँ ब्याट्री भित्रिनुअघि एटीबी र एक्सप्रेस मोडलका प्रिमियम ब्रान्डमात्र उपलव्ध थियो । जसको वारेन्टी ४८ महिनासम्मको थियो ।
ई–रिक्सा र अटो– रिक्सामा खपत कस्तो छ ?
ई– रिक्सामा पहिले हाम्रो निकै राम्रो खपत थियो तर अहिले ई रिक्साको भविष्य नै संकटमा छ । बातावरणमैत्री भनेर चिनिने ई–रिक्साको विकल्पमा अहिले प्रदूषण बढाउने अटो रिक्सा आइरहेको छ । यो निकै विडम्बनाको कुरा हो । अटो आइसकेपछि ई–रिक्सा विस्थापित हुन थालेको छ । यस हिसावले हेर्दा अवको १ बर्षभित्रमा ई–रिक्सा र यसको ब्याट्री बजारबाट विस्थापित हुने सम्भावना देखिएको छ । तथापि अटोमा पनि हाम्रै ब्याट्री प्रयोग भएको छ । ई–रिक्सा एउटैमा ५ वटासम्म ब्याट्री लाग्ने हुँदा यसमा धेरै खपत हुन्थ्यो भने अटोमा केही कम हुने मात्र हो ।
नाडाले पहिले देखि नै गर्दै आएका तीन वटा कुरालाई अझै नतिजामुखी बनाउने मेरो चाहना छ